St. Helena iBritish, Africa, COVID-Yemahara uye ikozvino Google Yakabatana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » St. Helena iBritish, Africa, COVID-Yemahara uye ikozvino Google Yakabatana
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Kuvakazve • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Muna 2018 St. Helena yakava chikamu cheAfrica payakazivisa kuve nhengo yeAfrican Tourism Board mu2019.
Nyaya dzekutaurirana dzakange dzatadzisa iyi Briteni Territory muSouthern Atlantic Ocean kuti ibatane.
Nhasi uno inoratidza chinguva munhoroondo yedigital seGoogle's Equiano undersea fiber optic internet tambo inogara pachitsuwa cheSt Helena muSouth Atlantic Ocean, ichiita nzvimbo iri kure yeBritish Overseas Territory nzvimbo yekutanga kumahombekombe kumisikidza chirongwa cheEquiano pakati peEurope nekumaodzanyemba kweAfrica.
Muna Zvita 2019, Hurumende yeSt Helena (SHG) yakasaina kondirakiti neGoogle yekubatanidza St Helena Island kuEquiano undersea fiber optic internet tambo, ichiendesa yekutanga St.
Izvi zvinoratidza nguva nyowani yehunyanzvi yechitsuwa chechipiri chiri kure kwazvo pasi rese uye chichava nemhedzisiro yakakura kwete chete pahupenyu hwezuva nezuva hwevagari vemo, asi pakukwanisa kwaro kukwezva kudyara kwemukati nekushanya.
Saint Helena inzvimbo yeBritish iri muSouth Atlantic Ocean.
Google yakangobatanidza St. Helena seCovid yemahara yeBritish African Tourism Dunhu
Parizvino COVID-19 haizivikanwe munzvimbo iri kure yepasi.
Ichi chitsuwa chiri kure chinopisa chinoputika chakarara makiromita 1,950 (1,210 mi) kumadokero kwemhenderekedzo yekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweAfrica, uye makiromita zviuru zvina (4,000 mi) kumabvazuva kweRio de Janeiro pamhenderekedzo yeSouth America.
Iyo tambo yedenderedzwa ngarava Teliri, akatakura tambo, akasvika achibva kuWalvis Bay musi wa31 Nyamavhuvhu 2021 kuRupert's Bay. Iyo yekupedzisira tambo yakadonhedzwa kubva kudivi rechikepe, uye vakasiyana vachibva vaisa tambo muyakafanorongedzwa pombi, kutanga kubva na6 mangwanani nhasi. Kupera kwetambo kwakaiswa paModular Cable Landing Station (MCLS) muRupert's, uko tambo ichabatanidza muzvivakwa zvemadhijitari echitsuwa ichi. Pakutanga mwedzi uno timu yevashandi gumi nevaviri yakasvika kuburikidza neye charter kutiza kubva kuUK, France, Greece neBulgaria kuti ifambise kumisa tambo uye kuyedza magetsi emagetsi ekushandisa mukati meLanding Station.
SHG Musoro weSustainable Development, Damian Burns, akati: "Iyi purojekiti inoenderana neSt Helena's Dhijitari Dhijitari uye inofanira kuita mutsauko wakakura kuhupenyu hwezuva nezuva hwevagari vedu. Mikana yekudzidza pamhepo inofanirwa kushandurwa, mikana mitsva yekudyara inofanira kuvhurika, vagari vepazvitsuwa vanofanirwa kuwana zvirinani mabasa e telemedicine, uye isu tinofanirwa kukwezva vanofamba nemadhijitari kubva chero kupi pasi.
Burns anoenda achiti: Iyo tambo yeEquiano inoisa St Helena pamepu yedhijitari, uye apo isu takaramba tisina COVID, simba redenda repasirese raireva kuti taifanirwa kuzivisa kugara kwoga uye dzimwe nzira dzekudzivirira kumiganhu yedu, zvichikanganisa bhizinesi nekushanya pachitsuwa ichi. Iri zuva rakakura rinoratidzira inguva yakakosha munguva apo patinogona kuona ramangwana rine tariro rekudzoreredza uye kubudirira pamberi.
St Helena's cable branch riine anenge 1,154km kureba uye richabatanidza chitsuwa ichi kune main trunk yeEquiano tambo, ichibatana neEurope nekumaodzanyemba kweAfrica. Kumhanya kunobva pamazana mashoma egigabiti pasekondi kusvika kumatabhuru akawanda, nekukurumidza zvakanyanya kupfuura yazvino satellite sevhisi.
Iyo tambo ichaenda inorarama kana zvese zviri zviviri St Helena bazi uye iyo huru trunk yeEquiano tambo yaiswa, simba, uye kuyedzwa; uye kana zvivakwa zvemuno neanopa zviripo uye akagadzirira kuenda kunogara kuSt Helena.
Idzi inhau dzakanaka zvakare dze St. Helena Tourism, nhengo ye African Tourism Bhodhi